I-Panorama: Ngasiphi ikusasa isihloko samahhala sesoftware nomthombo ovulekile? | Kusuka kuLinux
Ukufaka i amashumi amabili, nezinguquko eziningi kwifayela le- panorama, ukuzibuza: Liyini ikusasa leSoftware yamahhala noMthombo Ovulekile?
Umbuzo ubaluleke kakhulu, ngoba okuningi okwenzekile kulo nyaka owedlule, kuphawuliwe noma cha kubhulogi yethu, kusenza kucace kithi ukuthi imicimbi enjalo noma izinguquko ku panorama i-del Isoftware yamahhala nomthombo ovulekile benze okwabo ikusasa kubukeka into engaqinisekile noma engaphansi kokulungile kwabaningi, uma kuqhathaniswa neminyaka edlule. Ngenxa yalokho, ngenkathi abanye bekubona lokhu izinguquko njengoba ngokwemvelo futhi kunengqondoabanye bakuthatha njengokuphikisana nobunjalo be Isoftware yamahhala nomthombo ovulekile.
Ngakho-ke, singaqinisekisa ukuthi indawo yethu noma umhlaba uhlobene ne- Isoftware yamahhala nomthombo ovulekile, uhlupheke, ikakhulukazi kulo nyaka odlule, a ukunwetshwa okungenakuphikwa nokubalulekile, kusuka ku-niche yendabuko ye- Imiphakathi nezinhlangano zomphakathi ngase izinhlangano ezinkulu zamabhizinisi nezinhlangano ezizimele, ukuhleleka okuningi okuvela emazweni omhlaba nasemhlabeni jikelele, njenge IBM y Microsoft, ukusho nje 2.
1 Umbono wami
1.2 Akukho ukusekelwa
2 Izindatshana ezithakazelisayo ezihlobene ne-panorama
2.1 Sivuna i-panorama
2.2 Ngokumelene ne-panorama
Endabeni yami uqobo, angizami ukuntuleka kwezibalo ezibucayi noma ezisemthethweni noma ucwaningoLokho wukuthi, uma iningi lamalungu noma abasebenzisi be- Isoftware yamahhala nomthombo ovulekile, kunjalo noma uphikisana nalolu shintsho kwavela enhliziyweni yokuhamba kwethu.
Impela, kumawebhusayithi afana neyethu noma amanye, noma izinkundla, amaqembu noma iziteshi ze- I-Intanethi kanye Nezinkundla Zokuxhumana, umuntu uyabona futhi azizwe tirade nokuphikisana kwakheka, zombili izinhlangothi, abanye bavuna abanye baphikisa. Kepha, umbono wami ungesinye sezexwayiso futhi ngigcina ngithambekele ekungathembini, ekuhlanganiseni nasekuxhashazweni kakhulu Isoftware yamahhala nomthombo ovulekile ngenye ingxenye Ohulumeni bambalwa abasebenza ngokusobala futhi abazilawulayo futhi abalawula i-Transnational Giants.
Kusukela, yize kuliqiniso ukuthi ngikubona kuyinto enhle ukuthi i- Isoftware yamahhala nomthombo ovulekile, ngakho-ke I-GNU / Linux, nweba ube isekelwa futhi isetshenzisiwe njengoba a ikhwalithi ehlukile, ngu Izinhlangano kanye nezinkampani zikahulumeni nezizimele, kuwo wonke amazwe omhlaba.
Kuyiqiniso futhi ukuthi, ngiyasola kakhulu, ngokwesibonelo, ngokufaka okungenzeka noma okungokoqobo kwezengezo zomthetho noma zesoftware, khawula noma ukhawulele nganoma iyiphi indlela, ukusetshenziswa kwezicelo ezakhiwe ngaphansi kwesilinganiso sethu, ngokuqinisekile Ohulumeni noma ama-Giant Technological. Noma ukufakwa kwamakhodi we-telemetry, ukukhangisa, ukulandelela, noma iminyango yangemuva, okufihliwe noma cha, yilokhu okushiwo ngenhla.
Futhi yingakho umbuzo abaningi abazibuza wona:
Ngabe thina noma kufanele siqhubeke nokubheka lesi sizukulwane esisha sezicelo ezakhiwe oHulumeni namaCorporations njenge-Free Software noma i-Open Source, uma ngandlela thile bethula imikhawulo ethile yokusetshenziswa noma amakhodi angathandeki eningi?
Ngabe ukukhathazeka okufanelekile nokusimeme kwabanye bethu noma ukuphambanisa okumsulwa kwezobuchwepheshe, ukuthi lesi sigaba sokuthuthukiswa kweFree Software noma i-Open Source siguquka kanjani?
Ngabe iFree Software iya ngokuya iba Umthombo Ovulekile futhi / noma imahhala kuphela, ngoba ilusizo ngokwengeziwe emisebenzini nasemabhizinisini oHulumeni kanye Nezinhlangano Ezizimele?
Izindatshana ezithakazelisayo ezihlobene ne-panorama
Ngezansi kwamanye Imibhalo evela ku-Blog efanayo, eyenzelwa noma ephikisanayo, i-panorama kanye / noma isihloko sendatshana, ukuze ngamunye abeke owakhe umbono kulokho okuxoxwayo:
I-GNU vs. Google: Isoftware kaGoogle ayisi malware
Siyethemba ukuthi lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" mayelana «Panorama actual y futuro» i-del «Software Libre y Código Abierto», okwenze kwacaca kakhulu kithi ukuthi yini engenzeka ngempela, inesithakazelo esikhulu futhi iwusizo, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwesimangaliso semvelo, esikhulu futhi esikhulayo sokusebenzisa kanye nokwenzelwe «GNU/Linux».
Noma mane uvakashele ikhasi lethu lasekhaya ku- KusukaLinux ukufunda okunye okuthunyelwe okuthakazelisayo mayelana «Software Libre», «Código Abierto», «GNU/Linux» nezinye izihloko ezihlobene ne- «Informática y la Computación»kanye «Actualidad tecnológica».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » I-Panorama: Ngasiphi ikusasa isihloko seFree Software ne-Open Source?
Njengenjwayelo ku-Linux Post Install, umbono othakazelisa kakhulu wokuthi yini lo nyaka oqala nje ongaletha emkhakheni obaluleke njenge-software yamahhala ne-opensource, esetshenziswa kakhulu ngabantu abaningi nezinkampani futhi kuncane noma akukho okubonwa kakhulu kuningi isikhathi.
Ngabe kuzoba unyaka we-GNU / Linux? Impela hhayi kwideskithophu, kepha heyi, asethembe ukuthi amadivayisi ane-GNU / Linux afakwe kuqala noma - uma kungenjalo kakhulu ukubuza - azoqhubeka ukuphuma (noma kungathi shu), ngaphandle kwesithiyo somsebenzisi, uma efisa, njengoba bekwazi ukuyifaka ngaphandle kwenkinga.
Sethemba ukuthi kuzoba unyaka wephengwini ezingeni likahulumeni ngoba sithembekile kulo mkhakha ofanele, akukhona ukuthi sisondele ekutheni sibuse, ngakho-ke uma inqubekelaphambili yenziwa kulo mkhakha, kuzoba uphawu oluqondile, ikakhulukazi uma inikezwa ukubonakala.
Mayelana nodaba lwama-Smartphones namadivayisi ahlakaniphile, enye into engaphumelela engahlangene ngalutho neGoogle ngeke ibe yimbi ngoba ekugcineni izintshisekelo zale nkampani zilandelwa ngaphezu kokuthuthuka kwamahhala kwesoftware (ngenxa yalokho sibona kuhlelwe ukuphelelwa yisikhathi ngesihluku nokudeleleka).
Angidlulisi, ngiyakubongela futhi ku-Linux Post Install.
Sanibonani Teo! Futhi ngiyabonga ngokuphawula kwakho okuhambisanayo ku-athikili. Impela, asethembe ukuthi ukwesaba kwabanye mayelana ne-Free and Open Source Software akugcwaliseki futhi lokhu kuguquka okuxakile phakathi kwabanye "ohulumeni abambalwa abasebenza ngokusobala nokulawula iTransnational Giants", nakulo nyaka i-GNU / Linux Ecosystem iyaqhubeka nokukhula futhi iba ngaphezulu ngaphandle kwezinkinga ezinkulu.
I-OpenFOAM: Umthombo Ovulekile we-Computational Fluid Dynamics
I-Google Chrome izofaka phakathi ukuvimba kwesaziso esifana neFirefox